Koordinierungsstelle für Intensivmedizinische Sekundärtransporte MV
Leitstelle Westmecklenburg ILWM (Schwerin)
Koordinierungsstelle für Intensivmedizinische Patientenverlegungen MV
Bitte füllen Sie alle Felder ordnungsgemäß aus. Dieses Formular ist Grundlage der Kostenübernahme und der Durchführung des Transportes !
Die Daten gehen zur Koordinierungsstelle, ggf. zur Krankenkasse und zum Arzt des Einsatzmittels ! Beschränken Sie sich auf relevante Daten !
Alle optionalen Felder sind mit einem Stern markiert ! Vermeiden Sie Sonderzeichen wie *#,-+/?!
absendendes Krankenhaus 00000 - Unbekanntes Krankenhaus- Telefonat erforderlich 01067 Dresden - Städtisches Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt Städtisches Klinikum 01099 Dresden - Diakonissenkrankenhaus Dresden 01109 Dresden - St. Marien-Krankenhaus Dresden 01129 Dresden - Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt 01307 Dresden - Herzzentrum Dresden GmbH Universitätsklinik 01307 Dresden - Krankenhaus St.Joseph-Stift 01307 Dresden - Universitätsklinik "Carl Gustav Carus" an der 01326 Dresden - HELIOS Klinik Dresden-Wachwitz 01445 Radebeul - Elblandkliniken Meißen-Radebeul GmbH & Co. KG 01454 Radeberg - ASKLEPIOS-ASB Klinik Radeberg 01454 Radeberg - Kleinwachau Sächsisches Epilepsiezentrum Radeberg, OT Liegau-Augustusbad 01477 Arnsdorf - Sächsisches Krankenhaus Arnsdorf 01589 Riesa - Klinikum Riesa-Großenhain gGmbH Krankenhaus Riesa 01640 Coswig - Fachkrankenhaus Coswig Zentrum für Pneumologie, Allergologie, 01662 Meißen - Elblandkliniken Meißen-Radebeul GmbH & Co. KG 01705 Freital - Weißeritztal-Kliniken GmbH 01731 Kreischa - Reha Klinik Bavaria 01796 Pirna - Klinikum Pirna GmbH 01855 Sebnitz - Sächsische Schweiz Klinik Sebnitz 01896 Pulsnitz - Helios Pulsnitz 01917 Kamenz - Malteser Krankenhaus St. Johannes Kamenz 01968 Senftenberg - Klinikum Niederlausitz GmbH 02763 Zittau - Klinikum des Landkreises Löbau-Zittau gGmbH 02827 Görlitz - Malteser Krankenhaus St. Carolus Görlitz 02828 Görlitz - Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH 02906 Niesky - Krankenhaus der Diakonissenanstalt "Emmaus" 02929 Rothenburg - Orthopädisches Zentrum Martin-Ulbrich-Haus Rothenburg gGmbH 02943 Weißwasser - Kreiskrankenhaus Weißwasser 02977 Hoyerswerda - Klinikum Hoyerswerda gGmbH 03048 Cottbus - Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH 03048 Cottbus - Sana-Herzzentrum Cottbus 03130 Spremberg - Krankenhaus Spremberg 03149 Forst - Krankenhaus Forst GmbH 03172 Guben - Naemi-Wilke-Stift Guben 03238 Finsterwalde - Elbe-Elster Klinikum GmbH 04103 Leipzig - Universitätsklinikum Leipzig AöR 04105 Leipzig - Klinik am Rosental Fachklinik für plastisch-ästhetische 04129 Leipzig - Städtisches Klinikum "St.Georg" Leipzig 04177 Leipzig - Evang.Diakonissenkrankenhaus Leipzig 04277 Leipzig - St. Elisabeth Krankenhaus Leipzig 04289 Leipzig - Herzzentrum Leipzig GmbH 04289 Leipzig - Park-Krankenhaus Leipzig-Südost GmbH 04289 Leipzig - Soteria-Klinik Leipzig GmbH 04435 Schkeuditz - Helios Klinik Schkeuditz 04435 Schkeuditz - Sächsisches Krankenhaus für Psychiatrie und Neurologie 04509 Delitzsch - Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH Klinik Delitzsch 04552 Borna - HELIOS Kliniken Leipziger Land GmbH 04600 Altenburg - Evangelische Lukas-Stiftung Altenburg Klinik für Psychiatrie 04600 Altenburg - Kreiskrankenhaus Altenburg GmbH 04680 Zschadraß - Diakoniewerk Zschadraß gGmbH 04703 Leisnig - HELIOS Krankenhaus Leisnig 04720 Döbeln - Dr.Drogula GmbH Krankenhausbetrie be, Krankenhaus Döbeln 04758 Oschatz - Kreiskrankenhaus Oschatz gGmbH COLLM Klinik Oschatz 04808 Wurzen - Kliniken des Muldentalkreises gGmbH bH, mit 04828 Bennewitz - Neurologisches Rehazentrum Bennewitz Sachsenklinik 04838 Eilenburg - Kreiskrankenhaus Delitzsch/GmbH Klinik Eilenburg 04849 Bad Düben - Krankenhaus für Orthopädie Waldkrankenhaus Bad Düben 04860 Torgau - Kreiskrankenhaus Torgau "Johann Kentmann" gGmbH 06003 Halle - Krankenhaus St.Elisabeth und St. Barbara Halle 06097 Halle - Universitätsklinikum Halle (Saale) Medizinische Fakultät der 06112 Halle - Berufsgenossenschaftliche Kliniken Bergmannstrost Akademisches Lehrkrankenhaus 06114 Halle - Diakoniewerk Halle 06120 Halle - Krankenhaus Martha-Maria Halle Dölau gGmbH 06120 Halle - Universitätsklinikum Halle (Saale) 06124 Halle - Psychiatrisches Krankenhaus Halle 06217 Merseburg - Carl-von-Basedow-Klinikum Saalekreis GmbH 06295 Eisleben - Klinikum Mansfelder Land und Pflege gGmbH 06406 Bernburg - Klinikum Bernburg gGmbH Akademisches Lehrkrankenhaus der 06406 Bernburg - SALUS gGmbH Fachklinikum Bernburg/Saale 06406 Bernburg - Waldklinik Bernburg GmbH Neurologische Fachklinik zur 06449 Aschersleben - Kreiskliniken Aschersleben-Staßfurt gGmbH 06493 Ballenstedt - Lungenklinik Ballenstedt/Harz gGmbH 06526 Sangerhausen - Krankenhaus am Rosarium GmbH Sangerhausen 06567 Bad Frankenhausen - DRK gemeinnützige Krankenhaus- gesellschaft Brandenburg mbH 06618 Naumburg - Klinikum Burgenlandkreis gGmbH 06667 Weißenfels - ASKLEPIOS Kliniken Weißenfels-Hohenmölsen GmbH 06749 Bitterfeld - Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen gGmbH 06846 Dessau-Roßlau - Diakonissenkrankenhaus Dessau gGmbH 06847 Roßlau - St.Joseph-Krankenhaus Dessau Fachkrankenhaus für Psychiatrie und 06847 Roßlau - Städtisches Klinikum Dessau 06869 Coswig - MediClin Herzzentrum Coswig 06886 Lutherstadt - Klinik Bosse Wittenberg Fachkrankenhaus für Psychiatrie, 07318 Saalfeld - Thüringen-Kliniken GmbH "Georgius Agricola" Saalfeld-Rudolstadt 07338 Leutenberg - Fachkrankenhaus für Dermatologie Schloß Friedensburg GmbH 07381 Pößneck - Thüringen-Klinik Pößneck GmbH 07407 Rudolstadt - Thüringen-Kliniken GmbH "Georgius Agricola" Saalfeld-Rudolstadt 07407 Uhlstädt-Kirchhasel - Capio Klinik an der Weißenburg Fachkrankenhaus 07548 Gera - SRH Wald-Kliniken Gera gGmbH 07580 Ronneburg - Kreiskrankenhaus Ronneburg Fachklinik für Geriatrie und 07607 Eisenberg - Waldkrankenhaus "Rudolf Elle" gGmbH 07646 Stadtroda - Asklepios Fachklinikum Stadtroda GmbH 07743 Jena - Universitätsklinikum Jena 07907 Schleiz - Kreiskrankenhaus Schleiz gGmbH 07973 Greiz - Klinik ProLeben Greiz 07973 Greiz - Kreiskrankenhaus Greiz GmbH 08060 Zwickau - Heinrich-Braun-Krankenhaus" Zwickau Städtisches Klinikum 08060 Zwickau - Paracelsus-Klinik Zwickau 08107 Kirchberg - Kreiskrankenhaus Kirchberg GmbH 08134 Wildenfels - Asklepios Fachklinikum Wiesen GmbH 08228 Rodewisch - Klinikum Obergöltzsch-Rodewisch 08228 Rodewisch - Sächsisches Krankenhaus für Psychiatrie und Neurologie 08261 Schöneck - Paracelsus-Klinik Schöneck 08280 Aue - HELIOS Klinikum Aue 08340 Schwarzenberg - Onkologisches Fachkrankenhaus Marienstift Schwarzenberg 08359 Breitenbrunn - Kliniken Erlabrunn gGmbH 08371 Glauchau - Kreiskrankenhaus Glauchau "R. Virchow" gGmbH 08412 Werdau - Pleißental Klinik GmbH 08468 Reichenbach - Paracelsus Klinik Reichenbach GmbH 08523 Plauen - Krankenhaus Bethanien Plauen 08529 Plauen - HELIOS Vogtland-Klinikum Plauen GmbH 08626 Adorf - Paracelsus-Klinik Adorf GmbH 09116 Chemnitz - Klinikum Chemnitz gGmbH 09117 Chemnitz - DRK-Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein 09130 Chemnitz - Zeisigwaldkliniken Bethanien Chemnitz gGmbH 09232 Hartmannsdorf - Diakoniekrankenhaus Chemnitzer Land DIAKOMED gGmbH 09350 Lichtenstein - DRK Krankenhaus Lichtenstein gGmbH 09366 Stollberg - Kreiskrankenhaus Stollberg gGmbH 09405 Zschopau - Klinikum Mittleres Erzgebirge gGmbH Haus Zschopau 09456 Annaberg-Buchholz - EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg gGmbH 09526 Olbernhau - Klinikum Mittleres Erzgebirge gGmbH Haus Olbernhau 09599 Freiberg - Kreiskrankenhaus Freiberg gGmbH 09600 Niederschöna - Klinik am Tharandter Wald 09648 Mittweida - Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH 10115 Berlin - Bundeswehrkrankenhaus Berlin 10115 Berlin - St. Hedwig Kliniken Berlin 10117 Berlin - Augenklinik und Lasikzentrum Am Gendarmenmarkt 10117 Berlin - Charité-Universitätsmedizin Berlin 10117 Berlin - Fliedner Klinik Berlin 10117 Berlin - MEOCLINIC Internationale Privatklinik 10245 Berlin - Senioren- und TherapiezentrumHaus an der Spree 10247 Berlin - Augenklinik im Ringcenter 1 mit kosmetischer 10247 Berlin - Count Down- Entgiftungseinrichtung des Drogentherapie Zentrum 10249 Berlin - Klinik für plastische Chirurgie 10249 Berlin - Vivantes Klinikum im Friedrichshain 10365 Berlin - Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge 10365 Berlin - MedizinZentrum am Sana Klinikum Lichtenberg 10365 Berlin - Sana Klinikum Lichtenberg 10396 Berlin - Betreutes Wohnen Intensiv 10405 Berlin - Vivantes Klinikum im Friedrichshain Standort Prenzlauer Berg 10623 Berlin - Klinik am Kurfürstendamm Private Zahnklinik Mund-,Kiefer-und 10713 Berlin - Chirurgische Privatklinik am Hohenzollerndamm-CLINICA VITA 10713 Berlin - Sankt Gertrauden-Krankenhaus 10717 Berlin - Friedrich von Bodelschwingh Klinik für Psychiatrie 10777 Berlin - Klinik Hygiea 10785 Berlin - Elisabeth Klinik 10785 Berlin - Euro Eyes Augenlaserzentrum Berlin GmbH 10787 Berlin - Augenklinik am Wittenbergplatz mit kosmetischer Laserchirurgie 10787 Berlin - Franziskus-Krankenhaus 10789 Berlin - Internationale Wirbelsäulenklinik Berlin 10963 Berlin - Zahnklinik MEDECO Potsdamer Platz 10967 Berlin - Vivantes Klinikum Am Urban 12043 Berlin - Zahnklinik MEDECO Berlin-Neukölln 12099 Berlin - Ullsteinhausklinik für Gefäßmedizin und Ästhetische Medizin 12101 Berlin - St. Joseph-Krankenhaus 12109 Berlin - Zahnklinik MEDECO Berlin-Tempelhof 12203 Berlin - 12203 Berlin-Charite Benjamin Franklin 12203 Berlin - Charite Campus Benjamin Franklin 12207 Berlin - Krankenhaus Bethel Berlin gGmbH 12249 Berlin - Psychiatrische Tagesklinik Lankwitz 12249 Berlin - St. Marien-Krankenhaus Berlin 12351 Berlin - Ida-Wolff-Krankenhaus 12351 Berlin - Vivantes Klinikum Neukölln 12559 Berlin - DRK Kliniken Berlin / Köpenick 12621 Berlin - Vivantes Klinikum Hellersdorf 12627 Berlin - Klinik "Helle Mitte" GmbH Berlin Zentrum 12683 Berlin - Augenklinik Berlin-Marzahn GmbH 12683 Berlin - Unfallkrankenhaus Berlin Verein für Berufsgenossenschaftliche Heil- 12683 Berlin - Vivantes Klinikum Hellersdorf 13086 Berlin - Park-Klinik Weißensee 13088 Berlin - St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee 13125 Berlin - Evangelische Lungenklinik Berlin 13125 Berlin - Helios Klinikum Berlin-Buch 13187 Berlin - Maria Heimsuchung Caritas Klinik Pankow 13189 Berlin - 24h-Intensivpflegeeinrichtung 13347 Berlin - Evangelisches Geriatriezentrum Berlin gGmbH 13347 Berlin - Jüdisches Krankenhaus Berlin 13353 Berlin - Charite Campus Virchow-Klinikum 13353 Berlin - Deutsches Herzzentrum Berlin 13353 Berlin - Otto-Heubner-Centrum für Kinder- und Jugendmedizin 13357 Berlin - Zahnklinik MEDECO Berlin-Wedding 13359 Berlin - DRK Kliniken Berlin / Mitte 13359 Berlin - Life Cure GmbH 13405 Berlin - FlughafenFlughafen 13435 Berlin - Vitanas Krankenhaus für Geriatrie 13437 Berlin - Vivantes-Netzwerk für Gesundheit GmbH 13467 Berlin - Dominikus-Krankenhaus 13509 Berlin - Vivantes Humboldt-Klinikum 13581 Berlin - Zahnklinik MEDECO Berlin-Spandau 13585 Berlin - Vivantes Klinikum Spandau Standort Neue Bergstraße 13587 Berlin - Evangelisches Johannesstift Wichernkrankenhaus gGmbH 13589 Berlin - Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau 13595 Berlin - Havelklinik 13595 Berlin - Privatklinik Spandau PKS GmbH 14050 Berlin - DRK Kliniken Berlin / Westend 14050 Berlin - DRK Kliniken Berlin / Wiegmann-Klinik Klinik 14055 Berlin - Malteser-Krankenhaus 14055 Berlin - Paulinenkrankenhaus 14059 Berlin - Schloßpark-Klinik 14089 Berlin - Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe Klinik für anthroposophische Medizin 14089 Berlin - Median Klinik 14109 Berlin - GIP Intensiv-WGGIP Intensivpflege 14109 Berlin - Immanuel-Krankenhaus 14129 Berlin - Evangelisches Krankenhaus Hubertus 14129 Berlin - Klinik für Minimal Invasive Chirurgie am 14129 Berlin - Klinik Nikolassee 14129 Berlin - Kliniken im Theodor-Wenzel-Werk 14163 Berlin - Krankenhaus Waldfriede 14165 Berlin - Helios Klinikum Emil von Behring GmbH 14193 Berlin - Klinik für Kosmetische Chirurgie Dr. Meyburg 14193 Berlin - Martin-Luther-Krankenhaus 14195 Berlin - West-Klinik Dahlem 14195 Berlin - Zahnklinik MEDECO Berlin-Dahlem 14199 Berlin - DRK Kliniken Berlin / Park-Sanatorium Dahlem 14467 Potsdam - Klinikum "Ernst von Bergmann" Potsdam gGmbH 14469 Potsdam - Evangelisches Zentrum für Altersmedizin 14471 Potsdam - St. Josefs-Krankenhaus Potsdam 14482 Potsdam - Oberlinklinik 14532 Stahnsdorf - Pflege Daheim GmbH Tag&Nacht 14547 Beelitz - Kliniken Beelitz GmbH Neurologisches Fachkrankenhaus für 14641 Nauen - Havelland Kliniken GmbH 14770 Brandenburg - St. Marienkrankenhaus Brandenburg 14770 Brandenburg - Städtisches Klinikum Brandenburg GmbH 14772 Brandenburg - ASKLEPIOS Fachklinikum Brandenburg 14772 Brandenburg - ASKLEPIOS Fachklinikum Brandenburg 14772 Brandenburg - HELIOS Klinik Hohenstücken 14797 Lehnin - Evangelische Kliniken Luise-Henrietten-Stift Lehnin 14806 Belzig - Kreiskrankenhaus Belzig GmbH 14929 Treuenbrietzen - Johanniter-Krankenhaus im Fläming gGmbH 14943 Luckenwalde - DRK Krankenhaus Luckenwalde 14974 Ludwigsfelde - Ev. Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow gemeinnützige GmbH 15232 Frankfurt - Evangelisches Krankenhaus Lutherstift Frankfurt (Oder)/Seelow 15236 Frankfurt (Oder) - Klinikum Frankfurt (Oder) 15331 Strausberg - Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH Betriebsteil Strausberg 15526 Bad Saarow - 15526 Bad Saarow - 15526 Bad Saarow - HUMAINE Klinikum Bad Saarow/Fürstenwalde 15526 Bad Saarow - 15526 Bad Saarow - HUMAINE Klinikum Bad Saarow/Fürstenwalde 15526 Bad Saarow - HUMAINE Klinikum Bad Saarow/Fürstenwalde 15537 Grünheide - Median Klinik 15562 Rüdersdorf - Ev.-Freikirchliches Krankenhaus Rüdersdorf 15569 Woltersdorf - Evangelisches Krankenhaus "Gottesfriede" GmbH 15755 Teupitz - Asklepios Fachklinikum Teupitz 15831 Mahlow - Linde Remeo Mahlow 15848 Beeskow - Oder-Spree-Krankenhaus GmbH 15890 Eisenhüttenstadt - Städtisches Krankenhaus Eisenhüttenstadt GmbH 15907 Lübben - ASKLEPIOS Fachklinikum Lübben 15907 Lübben - Klinikum Dahme-Spreewald GmbH Spreewaldklinik Lübben 15926 Luckau - Evangelisches Krankenhaus Luckau gGmbH 16225 Eberswalde - Klinikum Barnim GmbH Werner Forßmann Krankenhaus 16225 Eberswalde - Martin Gropius Krankenhaus GmbH 16278 Angermünde - Kreiskrankenhaus Angermünde 16303 Schwedt/Oder - Klinikum Uckermark GmbH 16321 Bernau - Brandenburg Klinik Bernau bei BerlinRehabilitationsklinik 16321 Bernau - Epilepsieklinik Tabor Epilepsie-Zentrum Berlin-Brandenburg 16321 Bernau - Ev.-Freikirchliches Krankenhaus und Herzzentrum Brandenburg in 16321 Bernau - Immanuel Herzzentrum 16515 Oranienburg - Oberhavel Kliniken GmbH 16547 Birkenwerder - Asklepios Klinik Birkenwerder Fachkrankenhaus für Orthopädie 16766 Kremmen - Sana Kliniken Sommerfeld Helmut-Ulrici-Kliniken 16767 Leegebruch - LeegebruchIntensivpflegedienst 16775 Gransee - Sana Krankenhausverbund Nordbrandenburg 16816 Neuruppin - Ruppiner Kliniken GmbH 16816 Neuruppin - Ruppiner Kliniken GmbH 16866 Kyritz - KMG Kliniken AG 16909 Wittstock - IPW Intensivpflege Wittstock 16909 Wittstock - Klinikum Wittsock 16909 Wittstock - PIA Pflege-Intensiv Außerklinisch Wohngemeinschaft 16928 Pritzwalk - Krankenhaus Pritzwalk 17033 Neubrandenburg - Intensivbetreutes Wohnen Neubrandenburg 17036 Neubrandenburg - Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum 17036 Neubrandenburg - Intensivwohngemeinschaft des amb.PD Dr. Weise 17087 Altentreptow - Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Krankenhaus Altentreptow 17109 Demmin - Kreiskrankenhaus Demmin 17139 Malchin - Krankenhaus Malchin 17139 Malchin - Krankenhaus Malchin 17166 Teterow - DRK Krankenhaus Teterow gGmbH 17192 Waren - Klinik Amsee Interdiziplinäres Therapiezentrum für Pneumologie 17192 Waren - Mediclin Müritz Klinikum GmbH 17207 Röbel - psych. KrankenhausKlinik für Psychiatrie und Psychotherapie 17213 Malchow - Reha Klinik 17235 Neustrelitz - DRK-IntensivpflegeheimDRK-Intensivpflegeheim 17235 Neustrelitz - DRK-Krankenhaus Mecklenburg-Strelitz gGmbH 17235 Neustrelitz - Intensiv WG Wilma 17268 Templin - SANA-Klinik 17291 Prenzlau - Kreiskrankenhaus Prenzlau GmbH 17309 Pasewalk - Asklepios Klinik Pasewalk 17373 Ueckermünde - AMEOS Diakonie-Klinikum 17389 Anklam - Intensiv Pflegedienst Martina Baltz 17389 Anklam - Krankenhaus AnklamAmeos Klinikum 17419 Ahlbeck - Rehaklinik Seebad Ahllbeck 17438 Wolgast - Kreiskrankenhaus Wolgast gGmbH 17475 Greifswald - E.M.A. Universität Greifswald (öffentlich) 17475 Greifswald - Klinik / Polyklinik für Anästhesie und Intensivmedizin 17475 Greifswald - Klinik / Polyklinik für Jungendmedizin 17487 Greifswald - Klinikum der Ernst-Moritz-Arndt-Universität -Anstalt öffentliches Rechts- 17489 Greifswald - Evangelisches Krankenhaus Bethanien Fachkrankenhaus für Psychiatrie, 17489 Greifswald - Short Care Klinik Greifswald 17491 Greifswald - Neurologisches Rehabilitations- zentrum Greifswald 17495 Karlsburg - Klinikum Karlsburg Herz-und Diabeteszentrum Mecklenburg-Vorpommern 18055 Rostock - Betreutes Wohnen Intensiv 18055 Rostock - Universität Rostock Klinikum Anstalt öffentlichen Rechts 18057 Rostock - Intensivpflege Melita 18059 Rostock - Klinikum Südstadt Rostock 18069 Rostock - Tagesklinik für Psychiatrie/ Psychotherapie 18146 Rostock - Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 18147 Rostock - Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie 18209 Hohenfelde - Krankenhaus Bad Doberan 18246 Bützow - Warnow-Klinik Bützow gGmbH 18258 Schwaan-Waldeck - Fachklinik Schwaan-WaldeckRehaklinik 18273 Güstrow - KMG Klinikum Güstrow 18311 Ribnitz-Damgarten - Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten GmbH 18435 Stralsund - Hanse Klinikum Stralsund GmbH 18436 Stralsund - Intensivpflegedienst Lebenstraum 18437 Stralsund - ASB Intensivbetreutes Wohnen 18437 Stralsund - Intensiv Betreutes Wohnen24 h Intensivpflege 18516 Süderholz - DRK Krankenhaus Grimmen GmbH 18528 Bergen - 18528 Bergen - 18528 BergenWG IPD Lebenstraum 18528 Bergen - 18528 BergenWG IPD Lebenstraum 18528 Bergen - SANA Krankenhaus Rügen GmbH 19049 Schwerin - Helios Kliniken Schwerin 19055 Schwerin - WG Intensivpflege 19067 Leezen - HELIOS Klinik Leezen 19087 Crivitz - Krankenhaus am Crivitzer See GmbH 19230 Hagenow - Kreiskrankenhaus Hagenow 19258 Boizenburg - Integratives Gesundheitszentrum Boizenburg GmbH 19288 Ludwigslust - Ev. Krankenhaus Stift Bethlehem Ludwigslust gGmbH 19288 Ludwigslust - Evangelisches Krankenhaus Stift Bethlehem Ludwigslust gGmbH 19322 Breese - Kinderintensivpflege 19348 Berge - Intensiv - WG 19348 Perleberg - Kreiskrankenhaus Prignitz gGmbH 19370 Parchim - Asklepios Klinik Parchim 19395 Plau - Krankenhaus Plau am See 19395 Plau - MediClin Reha-Zentrum Plau am See 20095 Hamburg - EuroEyes Augen Laser Zentrum Hamburg Privatklinik 20099 Hamburg - Asklepios Klinik St. Georg 20148 Hamburg - Alster-Klinik Hamburg GmbH Privatklinik für plastische 20148 Hamburg - Praxisklinik am Rotenbaum GmbH 20149 Hamburg - Klinik in Pöseldorf GmbH Ästhetisch-kosmetisches Zentrum 20244 Hamburg - Facharztklinik Hamburg Betriebsteil "Michaelis" Betriebsteil "Andreasbrunnen" 20246 Hamburg - Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 20249 Hamburg - Martini-Klinik am UKE GmbH 20251 Hamburg - Dr. Klapp Operationszentrum Eppendorf 20253 Hamburg - Moser Klinik GmbH 20259 Hamburg - AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM HAMBURG 20259 Hamburg - Diakonie-Klinikum Hamburg Betriebsteil: Krankenhaus Elim Betriebsteil: 20357 Hamburg - Cardio Clinic Hamburg Fachkrankenhaus für Herzchirurgie 20357 Hamburg - Cardio Clinic Hamburg Fachkrankenhaus für Herzchirurgie 20357 Hamburg - Krankenhaus Jerusalem 21029 Hamburg - Bethesda-Allgemeines Krankenhaus gGmbH, Bergedorf 21031 Hamburg - Praxis-Klinik Bergedorf GmbH 21033 Hamburg - Berufsgenossenschaftliches Unfallkrankenhaus Hamburg 21073 Hamburg - Fachklinik Helmsweg Klinik für Gynäkologie und 21075 Hamburg - Asklepios Klinik Harburg 21075 Hamburg - Krankenhaus Mariahilf 21107 Hamburg - Wilhelmsburger Krankenhaus "Groß Sand" 21224 Rosengarten - Krankenhaus Ginsterhof 21244 Buchholz - Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH Krankenhaus 21266 Jesteburg - Waldklinik Jesteburg 21335 Lüneburg - Klinik Dr. Havemann 21335 Lüneburg - Orthoklinik Lüneburg GmbH 21339 Lüneburg - Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH 21339 Lüneburg - Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH 21376 Salzhausen - Krankenhaus Salzhausen 21379 Scharnebeck - Krankenhaus Scharnebeck 21423 Winsen - Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH Krankenhaus 21502 Geesthacht - Helios Kliniken 22081 Hamburg - Schön Klinik Hamburg-Eilbek 22149 Hamburg - Katholisches Kinderkrankenhaus Wilhelmstift 22307 Hamburg - Asklepios Klinik Barmbek 22457 Hamburg - Albertinen-Krankenhaus 22763 Hamburg - 22763 Hamburg - 22763 Hamburg - Asklepius Klinik Altona 22763 Hamburg - 22763 Hamburg - Asklepius Klinik Altona 22763 Hamburg - Asklepius Klinik Altona 22927 Grosshansdorf - 22927 - GrosshansdorfLungenClinic 23560 Lübeck - Sana Kliniken Lübeck GmbH 23562 Lübeck - Universität zu Lübeck 23714 Bad Malente-Gremsmühlen - August-Bier-Klinik Malente 23758 Oldenburg - Sana Kliniken Ostholstein GmbH- Klinik Oldenburg 23796 Bad Segeberg - Badb Segeberger Kliniken GmbHNeurologisches Zentrum 23843 Bad Oldesloe - Asklepios Klinik Bad Oldesloe 23845 Borstel - Medizinische Klinik 23936 Grevesmühlen - DRK Krankenhaus Grevesmühlen 23946 Boltenhagen - Strandklinik Boltenhagen 23966 Wismar - Hanse Klinikum Wismar 24105 Kiel - 24105 Kiel - 24105 Kiel - Universitätsklinikum Schleswig-HolsteinCampus Kiel 24105 Kiel - 24105 Kiel - Universitätsklinikum Schleswig-HolsteinCampus Kiel 24105 Kiel - Kinderherzzentrum KielUniklinik Schleswig-holstein 24105 Kiel - Universitätsklinikum Schleswig-HolsteinCampus Kiel 24116 Kiel - Städtisches Krankenhaus Kiel 24534 Neumünster - Friedrich-Ebert-Krankenhaus 24768 Rendsburg - imland Klinik Rendsburg 24837 Schleswig - Helios Schleswig 25524 Itzehoe - Klinikum Itzehoe 26113 Oldenburg - Klinikum Oldenburg 26121 Oldenburg - 26121 Oldenburg - Pius-Hospital 26121 Oldenburg - 26121 Oldenburg - 26121 Oldenburg - Pius-Hospital 26121 Oldenburg - 26121 Oldenburg - 26121-Oldenburg Pius-Hospital 26121 Oldenburg - 26121 Oldenburg - Pius-Hospital 26121 Oldenburg - 26121 Oldenburg - Pius-Hospital 26121 Oldenburg - 26121-Oldenburg Pius-HospitalPius-Hospital Oldenburg 26122 Oldenburg - Evangelisches Krankenhaus 26133 Oldenburg - HANSA Seniorenstift 26676 Barßel - FIP Facheinrichtung IntensivpflegeFIP Facheinrichtung Intensivpflege 27498 Helgoland - Paracelsus Nordseeklinik Helgoland 29120 Magdeburg - Median Klinik 29451 Dannenberg - Capio Elbe-Jeetzel-Klinik 29525 Uelzen - HELIOS Klinikum Uelzen 29549 Bad Bevensen - 29549 Bad Bevensen HGZ Herz- und Gefäßzent 29614 Soltau - Mediclin Klinikum Soltau 30167 Hannover - KRH Klinikum Nordstadt 30169 Hannover - Diakoniekrankenhaus Friederikenstift 30625 Hannover - Medizinische Hochschule Hannover 31137 Hildesheim - Beatmungspflegeheim 31535 Neustadt a. Rübenberge - Haus VitamenBeatmungs - WG 31840 Hessisch Oldendorf - BDH Klinik Hessisch Oldendorf 32545 Bad Oeynhausen - Herz- und Diabeteszentrum NRW 34369 Hof Geismar - Evangelisches KRH Gesund BrunnenZentrum f.Geriatrie u.neurologische Frührehabili 34537 Bad Wildingen - Neurologische Klinik Westend 35043 Marburg - Universitätsklinik Marburg 37075 Göttingen - Uni Göttingen 37154 Northeim - HELIOS Albert-Schweitzer-Klinik Northeim 37412 Herzberg am Harz - Helios Klinik Herzberg/Osterode 38518 Gifhorn - Klinikum Gifhorn 38700 Braunlage - Spezialpflegeheim Fichteneck 38723 Seesen - Asklepios Klinik Schildautal 39104 Magdeburg - Mobile Krankenpflege Magdeburg 39120 Magdeburg - MEDIAN Klinik NRZ Magdeburg 39120 Magdeburg - Otto von Guericke Universität 39345 Flechtingen - Median Klinikum 42699 Solingen - Diakonisches Werk Bethanien 44789 Bochum - UK Bergmannsheil 45239 Essen - Ruhrlandklinik 45527 Hattingen - Helios Kliniken 45711 Datteln - Kinderpalliativzentrum Datteln 47055 Duisburg - Sana Klinikum Duisburg 47805 Krefeld - Alexianer GmbH 48145 Münster - St. - Franziskus Hospital GmbH 48149 Münster - Universität 49074 Osnabrück - Christlicher Kinderhospital Niels-Stensen-Kliniken Osnabrück 49661 Cloppenburg - Skt. Prius Stift 49811 Lingen - Hedon Klinik 50937 Köln - Uniklinik 51109 Köln - 51109 Köln - RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik GmbH 51109 Köln - RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik GmbH 52062 Aachen - UNI 53177 Bonn - 53177 - Neurologisches Rehazentrum Godeshöhe 53721 Siegburg - Helios Klinikum 57072 Siegen - DRK Kinderkrankenhaus Siegen 58515 Lüdenscheid - Klinikum Lüdenscheid - Märkiscche Kliniken GmbH 60549 Frankfurt - Flughafen 63667 Nidda / Bad Salzhausen - 63667 Nidda / Bad Salzhausen - Fachklinik für Neurologie 63667 Nidda / Bad Salzhausen - Asklepios Fachklinik für Neurologie 63667 Nidda / Bad Salzhausen - Bad Salzhausen 65189 Wiesbaden - St.Josefs Hospital 68167 Mannheim - 00000 - Unbekanntes Krankenhaus- Telefonat erforderlichUniklinik Mannheim Kinderch 68167 Mannheim - 68167 Mannheim Uni 68167 Mannheim - Uniklinik 70174 Stuttgard - Krankenhaus Katharinenhospital 70174 Stuttgart - 70174 - Klinikum Stuttgart 70174 Stuttgart - Klinikum Stuttgart 76593 Gersbach - MediClin Reha-Zetrum 80337 München - 80337 München - Uni-Kinderklinik Dr. von Haunerschen Kinderspital 83707 Bad Wiessee - Medical Park 85110 Kipfenberg - Rhön Klinikum 86169 Augsburg - 86169 Awonia Sozialzentrum Hammerschmiede 89075 Ulm - UniversitätsklinikKinder-und Jugendmedizin 89081 Ulm - Universitätsklinikum Ulm 91054 Erlangen - Kinder und Jugendklink 93047 Regensburg - BezirkskrankenhausKlinik für Neurologische Rehabilitation 93053 Regensburg - Fakultät für Medizin- Dekant 95445 Bayreuth - Klinikum Bayreuth 96450 Coburg - Klinikum Coburg 97616 Bad Neustadt - Neurologische Klinik 99089 Erfurt - Helios Klinikum Erfurt Dringlichkeit 00-bitte auswählen 02-innerhalb von 60-180 Minuten 03-im Laufe des Tages 99-anderes Datum
Stationsname Transportmittel 00-bitte auswählen 01-entsprechend Diagnose+Witterung 02-Rettungswagen (Arzt wird duch Klinik gestellt) 03-Intensivtransportwagen mit Arzt 04-Intensivtransporthubschrauber mit Arzt
Einweis. Arzt Abholdatum 04.12.2020 05.12.2020 06.12.2020 07.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 10.12.2020 11.12.2020 12.12.2020 13.12.2020 14.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 19.12.2020 20.12.2020 21.12.2020 22.12.2020 23.12.2020 24.12.2020 Vorbestellzeit 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00
Einsatzgrund 00-bitte auswählen 02-zur dring. Herz-OP/Cor-Ag 03-zur Akutbehandlung in ein Spezialzentrum 04-zur intensivmed. Frührehabilitation 05-zur Organtransplantation 06-zur Weiterbehandlung aus Kapazitätsgründen 07-Rückverlegung nach Akutbehandlung 08-Inkubatortransport
Empfänger-Krankenhaus 00000 - Unbekanntes Krankenhaus- Telefonat erforderlich 01067 Dresden - Städtisches Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt Städtisches Klinikum 01099 Dresden - Diakonissenkrankenhaus Dresden 01109 Dresden - St. Marien-Krankenhaus Dresden 01129 Dresden - Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt 01307 Dresden - Herzzentrum Dresden GmbH Universitätsklinik 01307 Dresden - Krankenhaus St.Joseph-Stift 01307 Dresden - Universitätsklinik "Carl Gustav Carus" an der 01326 Dresden - HELIOS Klinik Dresden-Wachwitz 01445 Radebeul - Elblandkliniken Meißen-Radebeul GmbH & Co. KG 01454 Radeberg - ASKLEPIOS-ASB Klinik Radeberg 01454 Radeberg - Kleinwachau Sächsisches Epilepsiezentrum Radeberg, OT Liegau-Augustusbad 01477 Arnsdorf - Sächsisches Krankenhaus Arnsdorf 01589 Riesa - Klinikum Riesa-Großenhain gGmbH Krankenhaus Riesa 01640 Coswig - Fachkrankenhaus Coswig Zentrum für Pneumologie, Allergologie, 01662 Meißen - Elblandkliniken Meißen-Radebeul GmbH & Co. KG 01705 Freital - Weißeritztal-Kliniken GmbH 01731 Kreischa - Reha Klinik Bavaria 01796 Pirna - Klinikum Pirna GmbH 01855 Sebnitz - Sächsische Schweiz Klinik Sebnitz 01896 Pulsnitz - Helios Pulsnitz 01917 Kamenz - Malteser Krankenhaus St. Johannes Kamenz 01968 Senftenberg - Klinikum Niederlausitz GmbH 02763 Zittau - Klinikum des Landkreises Löbau-Zittau gGmbH 02827 Görlitz - Malteser Krankenhaus St. Carolus Görlitz 02828 Görlitz - Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH 02906 Niesky - Krankenhaus der Diakonissenanstalt "Emmaus" 02929 Rothenburg - Orthopädisches Zentrum Martin-Ulbrich-Haus Rothenburg gGmbH 02943 Weißwasser - Kreiskrankenhaus Weißwasser 02977 Hoyerswerda - Klinikum Hoyerswerda gGmbH 03048 Cottbus - Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH 03048 Cottbus - Sana-Herzzentrum Cottbus 03130 Spremberg - Krankenhaus Spremberg 03149 Forst - Krankenhaus Forst GmbH 03172 Guben - Naemi-Wilke-Stift Guben 03238 Finsterwalde - Elbe-Elster Klinikum GmbH 04103 Leipzig - Universitätsklinikum Leipzig AöR 04105 Leipzig - Klinik am Rosental Fachklinik für plastisch-ästhetische 04129 Leipzig - Städtisches Klinikum "St.Georg" Leipzig 04177 Leipzig - Evang.Diakonissenkrankenhaus Leipzig 04277 Leipzig - St. Elisabeth Krankenhaus Leipzig 04289 Leipzig - Herzzentrum Leipzig GmbH 04289 Leipzig - Park-Krankenhaus Leipzig-Südost GmbH 04289 Leipzig - Soteria-Klinik Leipzig GmbH 04435 Schkeuditz - Helios Klinik Schkeuditz 04435 Schkeuditz - Sächsisches Krankenhaus für Psychiatrie und Neurologie 04509 Delitzsch - Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH Klinik Delitzsch 04552 Borna - HELIOS Kliniken Leipziger Land GmbH 04600 Altenburg - Evangelische Lukas-Stiftung Altenburg Klinik für Psychiatrie 04600 Altenburg - Kreiskrankenhaus Altenburg GmbH 04680 Zschadraß - Diakoniewerk Zschadraß gGmbH 04703 Leisnig - HELIOS Krankenhaus Leisnig 04720 Döbeln - Dr.Drogula GmbH Krankenhausbetrie be, Krankenhaus Döbeln 04758 Oschatz - Kreiskrankenhaus Oschatz gGmbH COLLM Klinik Oschatz 04808 Wurzen - Kliniken des Muldentalkreises gGmbH bH, mit 04828 Bennewitz - Neurologisches Rehazentrum Bennewitz Sachsenklinik 04838 Eilenburg - Kreiskrankenhaus Delitzsch/GmbH Klinik Eilenburg 04849 Bad Düben - Krankenhaus für Orthopädie Waldkrankenhaus Bad Düben 04860 Torgau - Kreiskrankenhaus Torgau "Johann Kentmann" gGmbH 06003 Halle - Krankenhaus St.Elisabeth und St. Barbara Halle 06097 Halle - Universitätsklinikum Halle (Saale) Medizinische Fakultät der 06112 Halle - Berufsgenossenschaftliche Kliniken Bergmannstrost Akademisches Lehrkrankenhaus 06114 Halle - Diakoniewerk Halle 06120 Halle - Krankenhaus Martha-Maria Halle Dölau gGmbH 06120 Halle - Universitätsklinikum Halle (Saale) 06124 Halle - Psychiatrisches Krankenhaus Halle 06217 Merseburg - Carl-von-Basedow-Klinikum Saalekreis GmbH 06295 Eisleben - Klinikum Mansfelder Land und Pflege gGmbH 06406 Bernburg - Klinikum Bernburg gGmbH Akademisches Lehrkrankenhaus der 06406 Bernburg - SALUS gGmbH Fachklinikum Bernburg/Saale 06406 Bernburg - Waldklinik Bernburg GmbH Neurologische Fachklinik zur 06449 Aschersleben - Kreiskliniken Aschersleben-Staßfurt gGmbH 06493 Ballenstedt - Lungenklinik Ballenstedt/Harz gGmbH 06526 Sangerhausen - Krankenhaus am Rosarium GmbH Sangerhausen 06567 Bad Frankenhausen - DRK gemeinnützige Krankenhaus- gesellschaft Brandenburg mbH 06618 Naumburg - Klinikum Burgenlandkreis gGmbH 06667 Weißenfels - ASKLEPIOS Kliniken Weißenfels-Hohenmölsen GmbH 06749 Bitterfeld - Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen gGmbH 06846 Dessau-Roßlau - Diakonissenkrankenhaus Dessau gGmbH 06847 Roßlau - St.Joseph-Krankenhaus Dessau Fachkrankenhaus für Psychiatrie und 06847 Roßlau - Städtisches Klinikum Dessau 06869 Coswig - MediClin Herzzentrum Coswig 06886 Lutherstadt - Klinik Bosse Wittenberg Fachkrankenhaus für Psychiatrie, 07318 Saalfeld - Thüringen-Kliniken GmbH "Georgius Agricola" Saalfeld-Rudolstadt 07338 Leutenberg - Fachkrankenhaus für Dermatologie Schloß Friedensburg GmbH 07381 Pößneck - Thüringen-Klinik Pößneck GmbH 07407 Rudolstadt - Thüringen-Kliniken GmbH "Georgius Agricola" Saalfeld-Rudolstadt 07407 Uhlstädt-Kirchhasel - Capio Klinik an der Weißenburg Fachkrankenhaus 07548 Gera - SRH Wald-Kliniken Gera gGmbH 07580 Ronneburg - Kreiskrankenhaus Ronneburg Fachklinik für Geriatrie und 07607 Eisenberg - Waldkrankenhaus "Rudolf Elle" gGmbH 07646 Stadtroda - Asklepios Fachklinikum Stadtroda GmbH 07743 Jena - Universitätsklinikum Jena 07907 Schleiz - Kreiskrankenhaus Schleiz gGmbH 07973 Greiz - Klinik ProLeben Greiz 07973 Greiz - Kreiskrankenhaus Greiz GmbH 08060 Zwickau - Heinrich-Braun-Krankenhaus" Zwickau Städtisches Klinikum 08060 Zwickau - Paracelsus-Klinik Zwickau 08107 Kirchberg - Kreiskrankenhaus Kirchberg GmbH 08134 Wildenfels - Asklepios Fachklinikum Wiesen GmbH 08228 Rodewisch - Klinikum Obergöltzsch-Rodewisch 08228 Rodewisch - Sächsisches Krankenhaus für Psychiatrie und Neurologie 08261 Schöneck - Paracelsus-Klinik Schöneck 08280 Aue - HELIOS Klinikum Aue 08340 Schwarzenberg - Onkologisches Fachkrankenhaus Marienstift Schwarzenberg 08359 Breitenbrunn - Kliniken Erlabrunn gGmbH 08371 Glauchau - Kreiskrankenhaus Glauchau "R. Virchow" gGmbH 08412 Werdau - Pleißental Klinik GmbH 08468 Reichenbach - Paracelsus Klinik Reichenbach GmbH 08523 Plauen - Krankenhaus Bethanien Plauen 08529 Plauen - HELIOS Vogtland-Klinikum Plauen GmbH 08626 Adorf - Paracelsus-Klinik Adorf GmbH 09116 Chemnitz - Klinikum Chemnitz gGmbH 09117 Chemnitz - DRK-Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein 09130 Chemnitz - Zeisigwaldkliniken Bethanien Chemnitz gGmbH 09232 Hartmannsdorf - Diakoniekrankenhaus Chemnitzer Land DIAKOMED gGmbH 09350 Lichtenstein - DRK Krankenhaus Lichtenstein gGmbH 09366 Stollberg - Kreiskrankenhaus Stollberg gGmbH 09405 Zschopau - Klinikum Mittleres Erzgebirge gGmbH Haus Zschopau 09456 Annaberg-Buchholz - EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg gGmbH 09526 Olbernhau - Klinikum Mittleres Erzgebirge gGmbH Haus Olbernhau 09599 Freiberg - Kreiskrankenhaus Freiberg gGmbH 09600 Niederschöna - Klinik am Tharandter Wald 09648 Mittweida - Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH 10115 Berlin - Bundeswehrkrankenhaus Berlin 10115 Berlin - St. Hedwig Kliniken Berlin 10117 Berlin - Augenklinik und Lasikzentrum Am Gendarmenmarkt 10117 Berlin - Charité-Universitätsmedizin Berlin 10117 Berlin - Fliedner Klinik Berlin 10117 Berlin - MEOCLINIC Internationale Privatklinik 10245 Berlin - Senioren- und TherapiezentrumHaus an der Spree 10247 Berlin - Augenklinik im Ringcenter 1 mit kosmetischer 10247 Berlin - Count Down- Entgiftungseinrichtung des Drogentherapie Zentrum 10249 Berlin - Klinik für plastische Chirurgie 10249 Berlin - Vivantes Klinikum im Friedrichshain 10365 Berlin - Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge 10365 Berlin - MedizinZentrum am Sana Klinikum Lichtenberg 10365 Berlin - Sana Klinikum Lichtenberg 10396 Berlin - Betreutes Wohnen Intensiv 10405 Berlin - Vivantes Klinikum im Friedrichshain Standort Prenzlauer Berg 10623 Berlin - Klinik am Kurfürstendamm Private Zahnklinik Mund-,Kiefer-und 10713 Berlin - Chirurgische Privatklinik am Hohenzollerndamm-CLINICA VITA 10713 Berlin - Sankt Gertrauden-Krankenhaus 10717 Berlin - Friedrich von Bodelschwingh Klinik für Psychiatrie 10777 Berlin - Klinik Hygiea 10785 Berlin - Elisabeth Klinik 10785 Berlin - Euro Eyes Augenlaserzentrum Berlin GmbH 10787 Berlin - Augenklinik am Wittenbergplatz mit kosmetischer Laserchirurgie 10787 Berlin - Franziskus-Krankenhaus 10789 Berlin - Internationale Wirbelsäulenklinik Berlin 10963 Berlin - Zahnklinik MEDECO Potsdamer Platz 10967 Berlin - Vivantes Klinikum Am Urban 12043 Berlin - Zahnklinik MEDECO Berlin-Neukölln 12099 Berlin - Ullsteinhausklinik für Gefäßmedizin und Ästhetische Medizin 12101 Berlin - St. Joseph-Krankenhaus 12109 Berlin - Zahnklinik MEDECO Berlin-Tempelhof 12203 Berlin - 12203 Berlin-Charite Benjamin Franklin 12203 Berlin - Charite Campus Benjamin Franklin 12207 Berlin - Krankenhaus Bethel Berlin gGmbH 12249 Berlin - Psychiatrische Tagesklinik Lankwitz 12249 Berlin - St. Marien-Krankenhaus Berlin 12351 Berlin - Ida-Wolff-Krankenhaus 12351 Berlin - Vivantes Klinikum Neukölln 12559 Berlin - DRK Kliniken Berlin / Köpenick 12621 Berlin - Vivantes Klinikum Hellersdorf 12627 Berlin - Klinik "Helle Mitte" GmbH Berlin Zentrum 12683 Berlin - Augenklinik Berlin-Marzahn GmbH 12683 Berlin - Unfallkrankenhaus Berlin Verein für Berufsgenossenschaftliche Heil- 12683 Berlin - Vivantes Klinikum Hellersdorf 13086 Berlin - Park-Klinik Weißensee 13088 Berlin - St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee 13125 Berlin - Evangelische Lungenklinik Berlin 13125 Berlin - Helios Klinikum Berlin-Buch 13187 Berlin - Maria Heimsuchung Caritas Klinik Pankow 13189 Berlin - 24h-Intensivpflegeeinrichtung 13347 Berlin - Evangelisches Geriatriezentrum Berlin gGmbH 13347 Berlin - Jüdisches Krankenhaus Berlin 13353 Berlin - Charite Campus Virchow-Klinikum 13353 Berlin - Deutsches Herzzentrum Berlin 13353 Berlin - Otto-Heubner-Centrum für Kinder- und Jugendmedizin 13357 Berlin - Zahnklinik MEDECO Berlin-Wedding 13359 Berlin - DRK Kliniken Berlin / Mitte 13359 Berlin - Life Cure GmbH 13405 Berlin - FlughafenFlughafen 13435 Berlin - Vitanas Krankenhaus für Geriatrie 13437 Berlin - Vivantes-Netzwerk für Gesundheit GmbH 13467 Berlin - Dominikus-Krankenhaus 13509 Berlin - Vivantes Humboldt-Klinikum 13581 Berlin - Zahnklinik MEDECO Berlin-Spandau 13585 Berlin - Vivantes Klinikum Spandau Standort Neue Bergstraße 13587 Berlin - Evangelisches Johannesstift Wichernkrankenhaus gGmbH 13589 Berlin - Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau 13595 Berlin - Havelklinik 13595 Berlin - Privatklinik Spandau PKS GmbH 14050 Berlin - DRK Kliniken Berlin / Westend 14050 Berlin - DRK Kliniken Berlin / Wiegmann-Klinik Klinik 14055 Berlin - Malteser-Krankenhaus 14055 Berlin - Paulinenkrankenhaus 14059 Berlin - Schloßpark-Klinik 14089 Berlin - Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe Klinik für anthroposophische Medizin 14089 Berlin - Median Klinik 14109 Berlin - GIP Intensiv-WGGIP Intensivpflege 14109 Berlin - Immanuel-Krankenhaus 14129 Berlin - Evangelisches Krankenhaus Hubertus 14129 Berlin - Klinik für Minimal Invasive Chirurgie am 14129 Berlin - Klinik Nikolassee 14129 Berlin - Kliniken im Theodor-Wenzel-Werk 14163 Berlin - Krankenhaus Waldfriede 14165 Berlin - Helios Klinikum Emil von Behring GmbH 14193 Berlin - Klinik für Kosmetische Chirurgie Dr. Meyburg 14193 Berlin - Martin-Luther-Krankenhaus 14195 Berlin - West-Klinik Dahlem 14195 Berlin - Zahnklinik MEDECO Berlin-Dahlem 14199 Berlin - DRK Kliniken Berlin / Park-Sanatorium Dahlem 14467 Potsdam - Klinikum "Ernst von Bergmann" Potsdam gGmbH 14469 Potsdam - Evangelisches Zentrum für Altersmedizin 14471 Potsdam - St. Josefs-Krankenhaus Potsdam 14482 Potsdam - Oberlinklinik 14532 Stahnsdorf - Pflege Daheim GmbH Tag&Nacht 14547 Beelitz - Kliniken Beelitz GmbH Neurologisches Fachkrankenhaus für 14641 Nauen - Havelland Kliniken GmbH 14770 Brandenburg - St. Marienkrankenhaus Brandenburg 14770 Brandenburg - Städtisches Klinikum Brandenburg GmbH 14772 Brandenburg - ASKLEPIOS Fachklinikum Brandenburg 14772 Brandenburg - ASKLEPIOS Fachklinikum Brandenburg 14772 Brandenburg - HELIOS Klinik Hohenstücken 14797 Lehnin - Evangelische Kliniken Luise-Henrietten-Stift Lehnin 14806 Belzig - Kreiskrankenhaus Belzig GmbH 14929 Treuenbrietzen - Johanniter-Krankenhaus im Fläming gGmbH 14943 Luckenwalde - DRK Krankenhaus Luckenwalde 14974 Ludwigsfelde - Ev. Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow gemeinnützige GmbH 15232 Frankfurt - Evangelisches Krankenhaus Lutherstift Frankfurt (Oder)/Seelow 15236 Frankfurt (Oder) - Klinikum Frankfurt (Oder) 15331 Strausberg - Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH Betriebsteil Strausberg 15526 Bad Saarow - 15526 Bad Saarow - 15526 Bad Saarow - HUMAINE Klinikum Bad Saarow/Fürstenwalde 15526 Bad Saarow - 15526 Bad Saarow - HUMAINE Klinikum Bad Saarow/Fürstenwalde 15526 Bad Saarow - HUMAINE Klinikum Bad Saarow/Fürstenwalde 15537 Grünheide - Median Klinik 15562 Rüdersdorf - Ev.-Freikirchliches Krankenhaus Rüdersdorf 15569 Woltersdorf - Evangelisches Krankenhaus "Gottesfriede" GmbH 15755 Teupitz - Asklepios Fachklinikum Teupitz 15831 Mahlow - Linde Remeo Mahlow 15848 Beeskow - Oder-Spree-Krankenhaus GmbH 15890 Eisenhüttenstadt - Städtisches Krankenhaus Eisenhüttenstadt GmbH 15907 Lübben - ASKLEPIOS Fachklinikum Lübben 15907 Lübben - Klinikum Dahme-Spreewald GmbH Spreewaldklinik Lübben 15926 Luckau - Evangelisches Krankenhaus Luckau gGmbH 16225 Eberswalde - Klinikum Barnim GmbH Werner Forßmann Krankenhaus 16225 Eberswalde - Martin Gropius Krankenhaus GmbH 16278 Angermünde - Kreiskrankenhaus Angermünde 16303 Schwedt/Oder - Klinikum Uckermark GmbH 16321 Bernau - Brandenburg Klinik Bernau bei BerlinRehabilitationsklinik 16321 Bernau - Epilepsieklinik Tabor Epilepsie-Zentrum Berlin-Brandenburg 16321 Bernau - Ev.-Freikirchliches Krankenhaus und Herzzentrum Brandenburg in 16321 Bernau - Immanuel Herzzentrum 16515 Oranienburg - Oberhavel Kliniken GmbH 16547 Birkenwerder - Asklepios Klinik Birkenwerder Fachkrankenhaus für Orthopädie 16766 Kremmen - Sana Kliniken Sommerfeld Helmut-Ulrici-Kliniken 16767 Leegebruch - LeegebruchIntensivpflegedienst 16775 Gransee - Sana Krankenhausverbund Nordbrandenburg 16816 Neuruppin - Ruppiner Kliniken GmbH 16816 Neuruppin - Ruppiner Kliniken GmbH 16866 Kyritz - KMG Kliniken AG 16909 Wittstock - IPW Intensivpflege Wittstock 16909 Wittstock - Klinikum Wittsock 16909 Wittstock - PIA Pflege-Intensiv Außerklinisch Wohngemeinschaft 16928 Pritzwalk - Krankenhaus Pritzwalk 17033 Neubrandenburg - Intensivbetreutes Wohnen Neubrandenburg 17036 Neubrandenburg - Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum 17036 Neubrandenburg - Intensivwohngemeinschaft des amb.PD Dr. Weise 17087 Altentreptow - Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Krankenhaus Altentreptow 17109 Demmin - Kreiskrankenhaus Demmin 17139 Malchin - Krankenhaus Malchin 17139 Malchin - Krankenhaus Malchin 17166 Teterow - DRK Krankenhaus Teterow gGmbH 17192 Waren - Klinik Amsee Interdiziplinäres Therapiezentrum für Pneumologie 17192 Waren - Mediclin Müritz Klinikum GmbH 17207 Röbel - psych. KrankenhausKlinik für Psychiatrie und Psychotherapie 17213 Malchow - Reha Klinik 17235 Neustrelitz - DRK-IntensivpflegeheimDRK-Intensivpflegeheim 17235 Neustrelitz - DRK-Krankenhaus Mecklenburg-Strelitz gGmbH 17235 Neustrelitz - Intensiv WG Wilma 17268 Templin - SANA-Klinik 17291 Prenzlau - Kreiskrankenhaus Prenzlau GmbH 17309 Pasewalk - Asklepios Klinik Pasewalk 17373 Ueckermünde - AMEOS Diakonie-Klinikum 17389 Anklam - Intensiv Pflegedienst Martina Baltz 17389 Anklam - Krankenhaus AnklamAmeos Klinikum 17419 Ahlbeck - Rehaklinik Seebad Ahllbeck 17438 Wolgast - Kreiskrankenhaus Wolgast gGmbH 17475 Greifswald - E.M.A. Universität Greifswald (öffentlich) 17475 Greifswald - Klinik / Polyklinik für Anästhesie und Intensivmedizin 17475 Greifswald - Klinik / Polyklinik für Jungendmedizin 17487 Greifswald - Klinikum der Ernst-Moritz-Arndt-Universität -Anstalt öffentliches Rechts- 17489 Greifswald - Evangelisches Krankenhaus Bethanien Fachkrankenhaus für Psychiatrie, 17489 Greifswald - Short Care Klinik Greifswald 17491 Greifswald - Neurologisches Rehabilitations- zentrum Greifswald 17495 Karlsburg - Klinikum Karlsburg Herz-und Diabeteszentrum Mecklenburg-Vorpommern 18055 Rostock - Betreutes Wohnen Intensiv 18055 Rostock - Universität Rostock Klinikum Anstalt öffentlichen Rechts 18057 Rostock - Intensivpflege Melita 18059 Rostock - Klinikum Südstadt Rostock 18069 Rostock - Tagesklinik für Psychiatrie/ Psychotherapie 18146 Rostock - Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 18147 Rostock - Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie 18209 Hohenfelde - Krankenhaus Bad Doberan 18246 Bützow - Warnow-Klinik Bützow gGmbH 18258 Schwaan-Waldeck - Fachklinik Schwaan-WaldeckRehaklinik 18273 Güstrow - KMG Klinikum Güstrow 18311 Ribnitz-Damgarten - Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten GmbH 18435 Stralsund - Hanse Klinikum Stralsund GmbH 18436 Stralsund - Intensivpflegedienst Lebenstraum 18437 Stralsund - ASB Intensivbetreutes Wohnen 18437 Stralsund - Intensiv Betreutes Wohnen24 h Intensivpflege 18516 Süderholz - DRK Krankenhaus Grimmen GmbH 18528 Bergen - 18528 Bergen - 18528 BergenWG IPD Lebenstraum 18528 Bergen - 18528 BergenWG IPD Lebenstraum 18528 Bergen - SANA Krankenhaus Rügen GmbH 19049 Schwerin - Helios Kliniken Schwerin 19055 Schwerin - WG Intensivpflege 19067 Leezen - HELIOS Klinik Leezen 19087 Crivitz - Krankenhaus am Crivitzer See GmbH 19230 Hagenow - Kreiskrankenhaus Hagenow 19258 Boizenburg - Integratives Gesundheitszentrum Boizenburg GmbH 19288 Ludwigslust - Ev. Krankenhaus Stift Bethlehem Ludwigslust gGmbH 19288 Ludwigslust - Evangelisches Krankenhaus Stift Bethlehem Ludwigslust gGmbH 19322 Breese - Kinderintensivpflege 19348 Berge - Intensiv - WG 19348 Perleberg - Kreiskrankenhaus Prignitz gGmbH 19370 Parchim - Asklepios Klinik Parchim 19395 Plau - Krankenhaus Plau am See 19395 Plau - MediClin Reha-Zentrum Plau am See 20095 Hamburg - EuroEyes Augen Laser Zentrum Hamburg Privatklinik 20099 Hamburg - Asklepios Klinik St. Georg 20148 Hamburg - Alster-Klinik Hamburg GmbH Privatklinik für plastische 20148 Hamburg - Praxisklinik am Rotenbaum GmbH 20149 Hamburg - Klinik in Pöseldorf GmbH Ästhetisch-kosmetisches Zentrum 20244 Hamburg - Facharztklinik Hamburg Betriebsteil "Michaelis" Betriebsteil "Andreasbrunnen" 20246 Hamburg - Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 20249 Hamburg - Martini-Klinik am UKE GmbH 20251 Hamburg - Dr. Klapp Operationszentrum Eppendorf 20253 Hamburg - Moser Klinik GmbH 20259 Hamburg - AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM HAMBURG 20259 Hamburg - Diakonie-Klinikum Hamburg Betriebsteil: Krankenhaus Elim Betriebsteil: 20357 Hamburg - Cardio Clinic Hamburg Fachkrankenhaus für Herzchirurgie 20357 Hamburg - Cardio Clinic Hamburg Fachkrankenhaus für Herzchirurgie 20357 Hamburg - Krankenhaus Jerusalem 21029 Hamburg - Bethesda-Allgemeines Krankenhaus gGmbH, Bergedorf 21031 Hamburg - Praxis-Klinik Bergedorf GmbH 21033 Hamburg - Berufsgenossenschaftliches Unfallkrankenhaus Hamburg 21073 Hamburg - Fachklinik Helmsweg Klinik für Gynäkologie und 21075 Hamburg - Asklepios Klinik Harburg 21075 Hamburg - Krankenhaus Mariahilf 21107 Hamburg - Wilhelmsburger Krankenhaus "Groß Sand" 21224 Rosengarten - Krankenhaus Ginsterhof 21244 Buchholz - Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH Krankenhaus 21266 Jesteburg - Waldklinik Jesteburg 21335 Lüneburg - Klinik Dr. Havemann 21335 Lüneburg - Orthoklinik Lüneburg GmbH 21339 Lüneburg - Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH 21339 Lüneburg - Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH 21376 Salzhausen - Krankenhaus Salzhausen 21379 Scharnebeck - Krankenhaus Scharnebeck 21423 Winsen - Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH Krankenhaus 21502 Geesthacht - Helios Kliniken 22081 Hamburg - Schön Klinik Hamburg-Eilbek 22149 Hamburg - Katholisches Kinderkrankenhaus Wilhelmstift 22307 Hamburg - Asklepios Klinik Barmbek 22457 Hamburg - Albertinen-Krankenhaus 22763 Hamburg - 22763 Hamburg - 22763 Hamburg - Asklepius Klinik Altona 22763 Hamburg - 22763 Hamburg - Asklepius Klinik Altona 22763 Hamburg - Asklepius Klinik Altona 22927 Grosshansdorf - 22927 - GrosshansdorfLungenClinic 23560 Lübeck - Sana Kliniken Lübeck GmbH 23562 Lübeck - Universität zu Lübeck 23714 Bad Malente-Gremsmühlen - August-Bier-Klinik Malente 23758 Oldenburg - Sana Kliniken Ostholstein GmbH- Klinik Oldenburg 23796 Bad Segeberg - Badb Segeberger Kliniken GmbHNeurologisches Zentrum 23843 Bad Oldesloe - Asklepios Klinik Bad Oldesloe 23845 Borstel - Medizinische Klinik 23936 Grevesmühlen - DRK Krankenhaus Grevesmühlen 23946 Boltenhagen - Strandklinik Boltenhagen 23966 Wismar - Hanse Klinikum Wismar 24105 Kiel - 24105 Kiel - 24105 Kiel - Universitätsklinikum Schleswig-HolsteinCampus Kiel 24105 Kiel - 24105 Kiel - Universitätsklinikum Schleswig-HolsteinCampus Kiel 24105 Kiel - Kinderherzzentrum KielUniklinik Schleswig-holstein 24105 Kiel - Universitätsklinikum Schleswig-HolsteinCampus Kiel 24116 Kiel - Städtisches Krankenhaus Kiel 24534 Neumünster - Friedrich-Ebert-Krankenhaus 24768 Rendsburg - imland Klinik Rendsburg 24837 Schleswig - Helios Schleswig 25524 Itzehoe - Klinikum Itzehoe 26113 Oldenburg - Klinikum Oldenburg 26121 Oldenburg - 26121 Oldenburg - Pius-Hospital 26121 Oldenburg - 26121 Oldenburg - 26121 Oldenburg - Pius-Hospital 26121 Oldenburg - 26121 Oldenburg - 26121-Oldenburg Pius-Hospital 26121 Oldenburg - 26121 Oldenburg - Pius-Hospital 26121 Oldenburg - 26121 Oldenburg - Pius-Hospital 26121 Oldenburg - 26121-Oldenburg Pius-HospitalPius-Hospital Oldenburg 26122 Oldenburg - Evangelisches Krankenhaus 26133 Oldenburg - HANSA Seniorenstift 26676 Barßel - FIP Facheinrichtung IntensivpflegeFIP Facheinrichtung Intensivpflege 27498 Helgoland - Paracelsus Nordseeklinik Helgoland 29120 Magdeburg - Median Klinik 29451 Dannenberg - Capio Elbe-Jeetzel-Klinik 29525 Uelzen - HELIOS Klinikum Uelzen 29549 Bad Bevensen - 29549 Bad Bevensen HGZ Herz- und Gefäßzent 29614 Soltau - Mediclin Klinikum Soltau 30167 Hannover - KRH Klinikum Nordstadt 30169 Hannover - Diakoniekrankenhaus Friederikenstift 30625 Hannover - Medizinische Hochschule Hannover 31137 Hildesheim - Beatmungspflegeheim 31535 Neustadt a. Rübenberge - Haus VitamenBeatmungs - WG 31840 Hessisch Oldendorf - BDH Klinik Hessisch Oldendorf 32545 Bad Oeynhausen - Herz- und Diabeteszentrum NRW 34369 Hof Geismar - Evangelisches KRH Gesund BrunnenZentrum f.Geriatrie u.neurologische Frührehabili 34537 Bad Wildingen - Neurologische Klinik Westend 35043 Marburg - Universitätsklinik Marburg 37075 Göttingen - Uni Göttingen 37154 Northeim - HELIOS Albert-Schweitzer-Klinik Northeim 37412 Herzberg am Harz - Helios Klinik Herzberg/Osterode 38518 Gifhorn - Klinikum Gifhorn 38700 Braunlage - Spezialpflegeheim Fichteneck 38723 Seesen - Asklepios Klinik Schildautal 39104 Magdeburg - Mobile Krankenpflege Magdeburg 39120 Magdeburg - MEDIAN Klinik NRZ Magdeburg 39120 Magdeburg - Otto von Guericke Universität 39345 Flechtingen - Median Klinikum 42699 Solingen - Diakonisches Werk Bethanien 44789 Bochum - UK Bergmannsheil 45239 Essen - Ruhrlandklinik 45527 Hattingen - Helios Kliniken 45711 Datteln - Kinderpalliativzentrum Datteln 47055 Duisburg - Sana Klinikum Duisburg 47805 Krefeld - Alexianer GmbH 48145 Münster - St. - Franziskus Hospital GmbH 48149 Münster - Universität 49074 Osnabrück - Christlicher Kinderhospital Niels-Stensen-Kliniken Osnabrück 49661 Cloppenburg - Skt. Prius Stift 49811 Lingen - Hedon Klinik 50937 Köln - Uniklinik 51109 Köln - 51109 Köln - RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik GmbH 51109 Köln - RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik GmbH 52062 Aachen - UNI 53177 Bonn - 53177 - Neurologisches Rehazentrum Godeshöhe 53721 Siegburg - Helios Klinikum 57072 Siegen - DRK Kinderkrankenhaus Siegen 58515 Lüdenscheid - Klinikum Lüdenscheid - Märkiscche Kliniken GmbH 60549 Frankfurt - Flughafen 63667 Nidda / Bad Salzhausen - 63667 Nidda / Bad Salzhausen - Fachklinik für Neurologie 63667 Nidda / Bad Salzhausen - Asklepios Fachklinik für Neurologie 63667 Nidda / Bad Salzhausen - Bad Salzhausen 65189 Wiesbaden - St.Josefs Hospital 68167 Mannheim - 00000 - Unbekanntes Krankenhaus- Telefonat erforderlichUniklinik Mannheim Kinderch 68167 Mannheim - 68167 Mannheim Uni 68167 Mannheim - Uniklinik 70174 Stuttgard - Krankenhaus Katharinenhospital 70174 Stuttgart - 70174 - Klinikum Stuttgart 70174 Stuttgart - Klinikum Stuttgart 76593 Gersbach - MediClin Reha-Zetrum 80337 München - 80337 München - Uni-Kinderklinik Dr. von Haunerschen Kinderspital 83707 Bad Wiessee - Medical Park 85110 Kipfenberg - Rhön Klinikum 86169 Augsburg - 86169 Awonia Sozialzentrum Hammerschmiede 89075 Ulm - UniversitätsklinikKinder-und Jugendmedizin 89081 Ulm - Universitätsklinikum Ulm 91054 Erlangen - Kinder und Jugendklink 93047 Regensburg - BezirkskrankenhausKlinik für Neurologische Rehabilitation 93053 Regensburg - Fakultät für Medizin- Dekant 95445 Bayreuth - Klinikum Bayreuth 96450 Coburg - Klinikum Coburg 97616 Bad Neustadt - Neurologische Klinik 99089 Erfurt - Helios Klinikum Erfurt Kostenübernahme 00-bitte auswählen 01-Krankenkasse 02-Berufsgenossenschaft 03-abgebendes Krankenhaus 04-annehmendes Krankenhaus 05-Patient 99-Sonstiger
Patientenname Krankenkasse suchen
Tag der 1. Aufnahme durch bitte auswählen ... Hausarzt Facharzt Rettungsdienst Krankenhaus <span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF; text-decoration: ;"><span lang="de" style="background-color: #FFFFFF;">Patienten selbst</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> sonstiges Statusnummer
Beatmungsmodus volumenkontrolliert druckkontrolliert
ass. Beatmung ASB CPAP BIPAP
Peep mmHG FiO² % AMV l/min
Kreislaufzustand stabil instabil Herzlungenmaschine extraaortale-Ballonpumpe ECMO
EKG-Bild Sinusrhythmus Bradycardie Tachycardie Arryhthmie
Bewußtstein 00-bitte auswählen 01-klar 02-getrübt 03-komatös 04-sediert 05-narkotisiert 99-Sonstiges Körpergewicht kg Körperlänge cm
Zugänge kein Flexülen ZVK intraossär
Drainagen/Sonden Thorax li Thorax re Abdomen Intrakraniell
notwendiges Monitoring EKG SPO² Kapnographie PCO² osz. RR inv. RR ICP
aktuelle Vitalwerte RR Puls SP0²
PC0²* ICP* unter Katecholaminen *
Maßnahmen beim Transport Anzahl: Spritzenpumpen: Infussionspumpen: Transfusionen: Infusionen:
Absaugung ext. Stimulation ext. Defibrillation/Cardioversion
Nicht rettungsdienstspezifische Medikamente
(müssen dem Arzt mit übergeben werden)
Besonderheiten zum Patienten,
Geben Sie hier Ihre Legitimierung ein :
Ihre IP-Adresse: 18.214.23.30
Ich versichere das der Patient oder dessen Angehörige in unserem Hause über die Verarbeitung der persönlichen Daten informiert und belehrt wurde oder noch informiert wird.
copyright by Berufsfeuerwehr Schwerin - Integrierte Leitstelle Westmecklenburg
Koordinierungsstelle Intensivtransporte Mecklenburg-Vorpommern